Booliska Canada oo sheegay inay gacanta ku dhigeen nin ku lug lahaa afduubkii Amanda Lindhout iyo Nigel Brennan+VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Booliska Canada oo sheegay inay gacanta ku dhigeen nin ku lug lahaa afduubkii Amanda Lindhout iyo Nigel Brennan+VIDEO
Taliska Booliska Canada, ayaa waxay shaaciyen inay gacanta ku dhigeen hal nin, oo lala xiriirinaayo inuu ka qayb qaatay afduubkii Somaliya loogu gaystay laba Suxufi, oo u kala dhashay dalalka Australia iyo Canada.
Suxufiyiintan, ayaa lagu kala magacaabaa Amanda Lindhout oo Canada u dhalatay iyo Nigel Brennan oo Australian ah, waxayna Shabaabku afduubteen 23-kii August ee sanadkii 2008-da, waxaana la sii daayay November, 2009.
Ninkan oo lagu magacaabo Cali Cumar Adeer, ayaa afar maalmood oo keliya joogay Magaalada Ottawa ee Xarunta Canada, wuxuuna dalkaasi ku yimid fiiso booqasho oo sax ah. Shalay ayaana xabsiga la dhigay.
Booliska waxay qoraal ku sheegeen in ninkaasi ay laamaha ammaanka Canada ku daba jooggeen, wixii ka dambeeyay markii ay xoriyadoodu helleen labada Suxufi, ugu dambeena ay suurta gashay in nolosha lagu qabto.
Boolisku tafaasiil dheeraad ah kama aynaan bixin qaabka loo soo qabtay ninkaasi, balse Warbaahinta Canada waxay qoreysaa soo qabashada ninkaasi, inay ahayd mid ay laamaha ammaanku wax ka ogaayen.
Cali Cumar Adeer oo 37 sano jir ah, ayaa waxay Boolisku sheegeen inuu ahaa ninka keliya ee u dhaxeeyay Shabaabka iyo dadkii kale, ee ka shaqaynaayay sii deysmada Suxufiyiintaasi.
Booliska Canada, ayaa toddobadka soo socdo Maxkamad soo taaggi doono Adeer, inta ka horeysana waxaa su’aalo weydiin doona laamaha amniga dalkaasi.
Amanda Lindhout oo markii ay Canada ku laabatay la hadashay Warbaahinta dalkaasi, ayaa sheegtay in jirdil joogto ihi ay u gaysan jireen dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab, intii ay gacanta ugu jirtay.